Wholesale New style saturate dutu pfapfaidzo ruoko shower Mvura inoponesa handheld shower Manufacture and Supplier |Easo
New style saturate storm spray hand shower
Iyi Storm Spray Handheld shower inokupa Oxygenic shower ruzivo.Creative granular spray;mvura painobuda mumhuno unokosha, inogadzira firimu remvura remuorivhi risina kujeka uye rinoputsika kuita zviuru zvemadonhwe, kusanganisa neokisijeni;kuitira kuti uunze manzwiro akasununguka ekugeza mumhepo yeokisijeni.
Faceplate dhayamita: φ110mm.Muviri zvinhu: ABS plastiki.Kupedzwa Kwepamusoro: CP, MB kana kugadziriswa kwepamusoro pekurapa.Faceplate Kupedzisa: Ichena.CP plating giredhi ndeye ASS24, MB inosvika C4 giredhi.
Surface Kupedzisa Chrome/Nickel Yakapushwa/Oiri Yakaruzwa Bronze/Matt Black
Yakapfava kune Ganda, Kunakidzwa neOxygenic Shower
Creative granular spray;mvura painobuda mumhuno unokosha, inogadzira firimu remvura remuorivhi risina kujeka uye rinoputsika kuita zviuru zvemadonhwe, kusanganisa neokisijeni;kuitira kuti uunze manzwiro akasununguka ekugeza mumhepo yeokisijeni.
EASO's innovative pressurization tekinoroji inogona kukwidziridza zvakanyanya kukanganiswa kwemvura, kuitira kugadzira yakakodzera yekupfapfaidza yekugeza.
Kutarisira kune kudiwa kwekugezera pasi pepasi pesimba rekupa mvura system;simba rekupfapfaidza rakasimba pane kugeza nguva dzose.
Innovative Boost tekinoroji inounza yakagadzika kunakidzwa kwekugeza
EASO innovative pressure boost water inonyanya kukodzera kune yakaderera mvura pressure kana nzvimbo dzekuyerera.Nekumanikidza kuwedzera tekinoroji, inoita kuti mvura ikwane yekugezesa, inokubatsira iwe kunakidzwa neshawa yakagadzika.
Nhanhatu dzekupfapfaidza modes shawa Yemhando yepamusoro yekugeza maoko...
Waterfall pfapfaidza new handshower Six basa bat...
Eco bulb spray shower Storm spay handshower Wat...
5-Settings hand shower Simba rinsing spray
High pressure shower Boost pressure dhizaini ye ...
3F Care shower ine trickle function
Basin Faucet, Home Depot Shower Faucets, Delta Shower, Shower Faucet, Shower Column, Shower Tap,